(Att hitta en bostad)
Dadka ku nool gobolka Stockholm ayaa si joogto ah u sii kordhaya. Maadaama ay tirada dadku sii badanayso, waxa adag inaad guri ka hesho Stockholm. Tani waxa ay saamaysaa gaar ahaan dhalinyarada, ardayda iyo dadka dhawaan yimid waxana ay ku khasabtaa in ay guriku kiraystaan gacan labaad.
Si aad hoy u heshid waxaa la isku qori karaa safafka sugidda guryaha. Hase ahaatee,safafku wuu dheer yahay. Isku celcelis, waxa ay qaadataa toddoba sano si looga helo guri deegaanka/Magaalada Stockholm.
Waxaa jira habab kala geddisan oo guri lagu helo. Haddii la doonayo in guri la kiresto waxaa marka hore la la xiriiraa cidda guriga kireyneysa oo laga galaa liiska safka. Waxaa liiska safka geli kara qof keligii nool ama laba qof oo wadanool.
Degmooyinka qaarkood waxaa ku yaal hay’ada ururisa guryaha bannaan oo la iska qori haddii guri gacan koowaad ah la doonayo. Waxaa kaloo jira hay’ado gaar ah oo xiriirisa dadka doonaya in ay guri kireystaan iyo kuwa guryaha kireeya. Sharkadahaasina waxay badanaaba ka qaataan dadka doonaya in ay liiska safka galaan lacag khidmad ah.
Waqtiga safka loogu jira guriyaha gacanlabaadda ah ee Stockholm iyo magaalooyinka kaloo waaweyn wuxuu qaadan karaa sanooyin.
Si guri loo helo waxaa marka hore lagu xiraa dakhli qofka soo gala sannadkii. Shirkadaha guryuhuna waxay ku kala duwan yihiin inta dakhligu la isku xirayo sannadkii. Haddii laba qof ay guri wada raadsadaan waxaa la xisaabiyaa dakhligooda oo lay’su geeyey.
Boggaga Internet-ka ee degmooyinka waxaa ku qoran cinwaanada xafiiska guryaha degmooyinka iyo weliba shirkadaha guryaha. Waxaa wargeysada iyo Internet-ka lagu qoraa ogeysiis qolol iyo guryo bannaan, mararka qaarkood waxaa ogeysyo guryo bannaan lagu dhejiyaa dukaamada cunta hortooda.
Link-yada hoose waxa aad ka helaysaa macluumaadka shirkadda guryaynta iyo xafiisyada guryaynta ee degmooyinka.
In safka guryaha laga galo degmo kale
(Stå i bostadskö i annan kommun)
Xafiisyo badan oo guryaha ayaa waxay oggol yihiin in saf laga galo xataa haddii uu qofku deggan yahay degmo kale. Tusaale ahaan qof deggan Upplands Väsby ama Valdemarsvik ayaa wuxuu saf ka geli karaa Stockholm ama Umeå. Laakiin xafiisyada guryaha qaarkood ma oggola arrintaas.
Xafiiska guryaha ee magaalada Stockholm
(Stockholms stads bostadsförmedling)
Xafiiska guryaha ee magaalada Stockholm wuxuu qaybiyaa guryaha ku yaal iyo degmooyin badan oo ku yaal gobolka Stockholm. Waxaa boggagooda Internet-ka ku qoran habka safka loo galo, qiimaha la bixiyo iyo inta uu le’eg yahay waqtiga la sugayo guri.
Warbixin dheeraad ah waxaa laga akhrisan karaa boggaan: www.bostad.stockholm.se
Warbixintu waxay ku qoran tahay afaf kala duwan.
Bostadsrätter iyo äganderätter waxaa badanaa iibintooda loo maraa dillaalada guryaha. Dillaalku wuxuu lacag khidmad ah ka qaataa cidda guri iibbineysa, wuxuuna hubiyaa in kala iibsigu hab sax ah u dhacay. Dillaalku wuxuu ka jawaabaa su’aalaha ku saabsan xaaladda guriga, arrimaha xagga sharciga iyo dhaqaalaha.